ट्याक्सी कुदाउँदै सेयरमा लगानी गर्दै ! Bizshala -
ट्याक्सी कुदाउँदै सेयरमा लगानी गर्दै !
सेयर बजारमा छोटो समयमै करोडपति बनेका एक ट्याक्सी चालकको चाखलाग्दो कथा
काठमाण्डौं । तनहुँ जिल्ला बारभञ्ज्याङ गाउँपालिका ८ स्थायी घर भएका दीपकप्रसाद जैशी हाल काठमाण्डौं तीनकुनेमा बस्छन् । ५ जनाको परिवारसहित बसेका जैसीले टेस्ट मात्र पास गरेका छन्, तर सेयर र ट्याक्सीको कमाईले काठमाण्डौंमै एउटा घर किन्ने क्षमता राख्छन् ।
विगत १२ वर्षदेखि ट्याक्सी चलाइरहेका उनी ३ वर्षअघि सेयर बजारमा छिरेका हुन् । अहिले उनी जहाँ–जहाँ ट्याक्सी लिएर पुग्छन्, आँखा अगाडि नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको वेबसाइट समेत साथमै हुन्छ । हात स्टेयरिङमा हुन्छ भने आँखा नेप्सेको वेबसाइटमा । जता जता ट्याक्सी जान्छ, सँगै उनी बजार पनि विश्लेषण गरिरहेका हुन्छन् । यात्रुको गन्तव्य जाने क्रममा उनले खरीद गर्न चाहेको वा बिक्री गर्न चाहेको कम्पनीको सेयरको खरीदबिक्री आदेश पनि त्यही बेला दिन्छन् ।
निकै आकर्षणको केन्द्रबिन्दू मानिने सेयर बजारमा बिद्यार्थीदेखि व्यवसायी सबैको बिशेष आकर्षण छ । सेयर बजारमा साढे ३ वर्षअघि मात्र प्रवेश गरेका दीपक छोटो समयमा नै एक खारिएका र सेयरबजारका उत्तारचढावलाई आत्मविश्वासका साथ निर्धक्क लगानी गर्ने लगानीकर्ताका रुपमा परिचित छन् ।
सेयर लगानीकर्ता जैसीले अनामनगरस्थित एक ब्रोकर कार्यालयका ब्रोकरको सल्लाहसुझाव र अग्रज लगानीकर्ताहरुका हौसलाबाट सेयरमा लगानी गर्न थालेका हुन् । आर्थिक पत्रपत्रिका दैनिक रुपमा अध्ययन गर्ने उनी आफ्नो भित्री इच्छाबाट सेयरमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर नै उत्प्रेरित भई यस क्षेत्रलाई पार्टटाइमका रुपमा लगानी गरिरहेका छन् ।
प्राथमिक र दोस्रो बजारमा लगभग सँगसँगै लगानी गर्न सुरु गरेका उनले सुरुको आईपीओ भरेको सम्झना नभए पनि दोस्रो बजारमा टीडीबीएल(टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक)को ५ सय कित्ता रु. ५७५ प्रतिकित्ताका दरले किनेको अनुभव उनी सुनाउँछन् । उक्त सेयर अहिलेसम्म रहेको र सम्पत्ति डबल भएको उनले दाबी गरे ।
‘मेरो सेयर’मार्फत पनि अब त आईपीओ भर्न पाइन्छ नि भन्दा उनले भने–‘घरमा नेट नभएकाले त्यत्ति अभ्यस्त छैन, अब त्यो सुविधा पनि लिनुपर्ला ।’ उनले बैंकमा गएर आफू लगायत परिवारको सिआस्वाबाट नै सेयर आवेदन गर्ने गरेको र यसबाट पनि सहज नै भएको जैसीले बताए ।
नयाँ विचारबाट काम र कामसँग नयाँ विचार आउँछ भन्ने सिद्धान्त बोकेका उनले ६० सालतिर भाडाकुँडाको सेल्समेनका रुपमा काम गरे । त्यहाँबाट ६ वर्ष जत्ति काम गर्दागर्दै केही पैसा बचत गरे । बचत भएको ३ लाख जति र बाँकी पैसा फाइनान्स गरेर एउटा ट्याक्सी किने ।
ट्याक्सी चलाएको पनि १२ वर्ष जति भयो । अहिले उनीसँग ३ वटा ट्याक्सी छ र ५ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् । अहिले राम्रो कमाई ट्याक्सीबाट भईरहेको र घरखर्च चलाएर बाँकी पैसा सेयरमा लगानी गर्ने गरेको उनको भनाई छ ।
स्वविवेक र स्वअध्ययनमा खप्पीस उनी ब्रोकरमार्फत सरसल्लाहले केही टेवा र आफ्नो लगानी रणनीतिमा अब्बल दरिन उनी सेयर बजारको प्रत्यक्ष कारोबार ट्याक्सी एकसाइडमा रोकेर २÷३ मिनेट हेर्ने गरेको उनले बिजशालालाई बताए ।
सेयर लगानीकर्ताको अवगुण घटबढमा आत्तिने र सेयर बजारको विशेषता भनेकै घटबढ हुनु हो भन्ने उनको बुझाई छ । उनले आफूसँग रहेको रकमको ५० प्रतिशत सेयरमा लगानी गर्छन् भने बाँकी ५० प्रतिशत भैपरी आउने कोषमा राख्ने गर्छन् ।
ऋण लिएर लगानी गर्नुहुँदैन भन्ने जैसीले ऋण लिए पनि अवसर छोप्ने गरी अध्ययन गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्ने उनले बताए ।
उनको पोर्टफोलियोमा अधिकांश सेयर बैंकका छन् र केही अंश इन्सुरेन्सका पनि छन् । १२ वटा भन्दा बढी ‘क’ र ‘ख’ वर्गका बैंकका सेयरका मालिक उनको एनएलआईसी, नेकोसहितको गरी जम्माजम्मी १० हजार कित्तासहितको पोर्टफोलियो भएको उनले सुनाए । बीचबीचमा २÷३ कम्पनीहरुका सेयर खरिदबिक्री पनि गरेर मनग्यै पैसा कमाएको उनको अनुभव रहेको छ ।
आफ्नो ब्रह्म र आफ्नो विश्लेषणबाट प्रतिकित्तामा २० देखि १ सय रुपैयाँसम्म आए प्रोफिट बुक गरेर सेयर बेच्ने गरेको उनी बताउँछन् । सेयर कारोबारी निकै चतुर हुनुपर्ने र एकचोटि त हप्ता दिनमा ५० हजारसम्म कमाएको उनको स्मरण छ ।
बजार हाल घटिरहेका बेला ३० प्रतिशत मात्रै पोर्टफोलियोमा नोक्सानी भएकामा उनी अलिकत्ति पनि विचलित छैनन् । ‘ट्याक्सीमा लगानी गरेको भए १ को २ हुन्थ्यो तर पनि सन्तुष्टि छु।’–जैसीले भने ।
अहिलेको नोक्सान कुनै दिन यही सेयर बजारबाट नै कभर हुने र अनन्तमा भविष्य उज्वल रहेको उनी आत्मविश्वासका साथ भन्छन् । ४ घण्टा मात्र घरमा बिताउने उनी ट्याक्सीमा नै अधिकांश समय बिताउँछन् र ट्याक्सीको यात्रासँगै उनको साथमा बजार खुलेको बेला नेप्सेको वेबसाइट हरदम आँखा अगाडि नै हुन्छ ।
बाह्र वर्षदेखि ट्याक्सी कुदाएका उनले आगामी दिन ट्याक्सीबाट कमाएको पैसा अलि अलि गर्दै सेयरमा लगानी बढाउँदै लैजाने योजना बनाएका छन् ।
सास र नाम बीचको जीवन हो भन्ने बुझेका उनले भने–‘म सफल पनि होइन, असफल पनि होइन, तर मेरो सडकबाट करोडपति हुने इच्छा लगभग पूरा भइसकेको छ र सेयर बजारमा रोपेको पैसाले बुढेसकालमा सहज जीवन काट्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास छ।’
अहिले ट्याक्सी चलाएर गरेको आम्दानी र बाँकी ट्याक्सीको कमाई सेयरमा ओइराएका उनी बताउँछन् । ‘अहिले त बजारमा रोप्ने मात्र गरेको छु।’उनले थपे ।
नवप्रवेशी लगानीकर्तालाई बिजशालामार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ भन्ने जिज्ञासा राख्दा उनले भने–‘आउनुस्, बुझेर आउनुुस्, आजभोलि किनेर करोडपति हुने उद्देश्यले नआउनुस् ५/१०/१५/२० वर्षे योजना अन्तर्गत आए सफल भइन्छ ।’
र, उनले थप प्रष्ट्याउँदै भने–‘बढेको बेला हैन, घट्दो बजारमा छिर्ने सल्लाह दिन चाहान्छु ।’ बजारको प्रेसर माग र आपूर्तिलाई विश्लेषण गर्न र चतुर्याईका साथ लगानी गर्न जैसी सुझाउँछन् ।
ट्याक्सीहरु अझ थप्ने र सेयरमा पनि थप लगानी बढाउँदै जाने भावी योजना रहेको बताउने उनले आफ्नो माटोमा नै पैसा लगानी गर्ने बताए ।
होहल्लामा नलागी स्वविवेकमा सेयरमा लगानी गरे ९९ प्रतिशत सफल भइने उनको दाबी छ । तर उनी भन्छन्–‘मैले किनेका सेयरको मूल्य १ सयमै झरेपनि म डगमगाउँदिन।’
सेयर बजारलाई पूर्ण पेशा भन्दा पनि साइट पेशाको रुपमा अगाडि बढाउन सके राम्रो हुने उनको सुझाव छ । अन्य पेशाबाट आएको नाफा थोरै थोरै गर्दै लगानी बढाउँदै लैजानुपर्ने उनको सुझवा छ ।
नियामक निकायले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउनुपर्ने र यसलाई पनि राज्यको एक अंग सम्झिएर सोहीअनुसार नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
बजारका चतुर खेलाडी बाहिरिनु, सेयर संख्यामा आएको बढोत्तरी र दूरदर्शी लगानीकर्ताको अभावका कारण अहिले बजार घटिरहेको समेत उनको विश्लेषण छ ।
आफ्नो संघर्षको कथा बताउँदा निकै आत्मविश्वासी देखिएका उनले भने–‘पाखुरामा विश्वास र भर परेर अहोरात्र मिहिनेत गरे नेपालमै सुन फलाउन सकिन्छ । सेयर बजारको भविष्य उज्ज्वल रहेको छ ।’
उनले बजार घटेर चौपट भई धेरै राम्रा कम्पनीको सेयरको मूल्य निकै न्यून स्तरमा आएको बेला नै सेयर बजारमा प्रवेश गर्ने र खरिदारी बढाउने सही अवसर भएकोले यही बेलामा लगानी बढाउन उनले लगानीकर्ताहरुलाई आह्वान गरे ।
‘पर्ख र हेरको रणनीतिमा रहेका लगानीकर्ताहरुलाई सेयरको भविष्य स्वर्णिम छ, लगानी गरौं ।’ कुराको बिट मार्दै उनले भने–‘बजारमा एकाएक बुलिस प्रवृति आएपछि फेरि नभन्नुहोला उफ मौका गुमाईयो, रेल छुट्यो भनेर ।’
nepal stock exchange success story